Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 29
Mitrosina amin’ny trosa…
Par Taratra sur 09/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mibitaka sy mirehaka ny mpitondra hoe nahazo volabe amin’ireo mpamatsy mahazatra. Trosan’ny mpampanjana-bola ny marina, fakan-tombony. Takalom-patsa, vidim-pihinanana: ny an’ny tena kely no mahatsembotsemboka. Nefa tsy tsemboka amin’izay kely an-tanana ny mpitondra, fa mitavandra sy mitady hitavana. Hisitrika inona amin’izany ny vahoaka ifotony ao anaty fahantrana lalina sy maharitra? Ela izay fitrosana mahazatra izay. Izay […]
Par Taratra sur 08/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihen-danja isan-taona ny herijikan’ny Malagasy miatrika ny fetin’ny Krismasy sy ny faran’ny taona. 18 andro sisa tsy higadonan’ny fetin’ny Krismasy kanefa toa tsy rototra amin’izany ny ankamaroan’ny olona tazana eny an-dalambe. Fahasahiranana sy tsy fahampiana no ambetin-tenin’ny renim-pianakaviana rehefa tafaresaka. Manaporofo ny tsy fahataitairan’ny olona hiatrika fety ny fahanginan’ny tsena hoy ireo mpivarotra. Zara raha […]
Fampianarana tsy misy fotony !
Par Taratra sur 07/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Volavolaina hitam-birao ny zaza malagasy. Miharihary amin’ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara io. Izay napetraky ny Frantsay ihany no nasiam-panovana sy navadibadika eo. Afaka bakalorea ny zaza malagasy iray, inona no hainy ? Vokatra manjavozavo sy manalasala. Na io teny malagasy nitaizan-dray sy reniny azy io aza, tsy voafehiny akory ny manoratra azy. Fampianarana tsy misy fotony ! […]
Par Taratra sur 06/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Nanakoako, tsy eto Madagasikara irery ihany fa manerana ny vazantany efatra, ny naha voahosotra ho tompondaka eran-tany amin’ny tsipy kanetibe ny Malagasy. Niresaka izany avokoa, indrindra ireo haino aman-jery sy ny gazety any ivelany. Takon’iny vokatra tsara iny indray aloha izany ny endrika ratsy nampalaza an’i Gasikara. Nodinganin’iny ihany koa ny resaka politika ary hadino […]
Par Taratra sur 05/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fiteny ny hoe: “Ny raharaham-pirenena, tsy ananan-kavana”. Tsy inona fa ny tsy famelana ny havana hanao ny danin’ny kibony na izay saim-pantany ao anaty fanjakana. Raha manao ny tsy mety aza ny havana, ampiharana lalàna fa tsy avela amin’izao na odian-tsy hita na tsy fantatra. Nefa tsy izany ny zava-misy sy izay iainana amin’izao, fa […]
Lango malefaka, lainga mahalefaka…
Par Taratra sur 03/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fandre amin’ny kabarin’ny mpitondra ny lango malefaka: manambitamby, mampandry adrisa, mandrebireby. Misy tokoa ny manao rapa-dango, rehefa sendra izay mpandangolango: mino azy, manantena sy miandry zavatra. Mahabe sy mampirongatra ny lango malefaka ny kabary amin’ny fampielezan-kevitra, ny fahatongavan’ny vahiny isehosehoana sy isekosekoana, ny fanamarinan-tena ho tsy manaiky diso na lehibe tsy meloka, ny fampanantenana lava… […]
Lanja miakatra… midina
Par Taratra sur 02/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Miakatra, miakatra, miakatra… Inona izao no tsy miakatra eto amintsika ? Tafakatra 10.000 Ar izao ny kilaon’ny henan’omby tsy mifangaro (mbola misy ambonin’izany aza) raha ny tazana eny an-tsena. Dimanjato sy roa arivo ariary izany ny fahefa-kilao. Izay mantsy, amin’ny ankapobeny ny lanja takatry ny ankamaroan’ny fianakaviana… sahirana. Raha mitohy izao, ho nofinofy sisa izany hihinan-kena […]
Saro-tadiavina toy ny vaovao tsara…
Par Taratra sur 01/12/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Na ny mpanao gazety koa aza anie mba leo e ! Saingy ireny aloha ny vaovao misy (sy be mpitady), dia ireny no trandrahina. Inona ny malaza amin’izao ? Fitsaram-bahoaka, vono olona, fanafihana, asan-dahalo, haintrano, fanolanana, kidnapping, zaza very, ady tany, fitrandrahana tsy ara-dalàna, delestazy, sns. Raha miova kely, vaovao politika izay. Tsy vaovao tsara koa mazàna, […]
Par Taratra sur 30/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Iza izao no mba mahalala ny votoatin’ny Tetibolam-panjakana 2017? Satria ny adihevitra natao nandritra ny fandaniana ny tolo-dalana naroson’ny governemanta tetsy amin’ny Antenimieram-pirenena lasa fangatahan’ny solombavambahoaka tombontsoa manokana. Toy ilay 200 tapitrisa Ar isaky ny distrika natao hamatsiam-bola ny asa fampandrosoana eny ifotony. Ny depiote maika amin’ny famoahana azy io satria izy ireo ho hitarika […]
Inona ny niova?
Par Taratra sur 29/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita iny ny frankofonia! Inona ny niova? Samy nametraka io fanontaniana io ny rehetra, na nandritra ity raharaha manan-tantara ity, indrindra fa izao aoriany izao. Maro ny miteny mantsy: mitondra inona eto amintsika ity frankofonia ity? Mety samy manana ny fiovana hitany sy andrasany ny rehetra, fa raha roritina kely aloha, sy ny resabe any […]
Aza mba manao ratsy ihany e !
Par Taratra sur 28/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Lavo ny andrarezina ! Nodimandry teo amin’ny fahasivifolo taonany, ny alin’ny zoma hifoha asabotsy teo, i Fidèle Castro. « Rain’ny revolisiona kiobanina », hoy ny sasany. Hany mpitondra nahavita nanohitra ny imperialisma amerikanina tamin’ny fanjakazakany tao anatin’ny antsasaka siekla iray manontolo. Tsy nisy tsy niaiky azy tamin’izany ireo mpitondra goavana 11, nifandimby nitondra an’i Etazonia. Ao ireo nampitovy […]
Par Taratra sur 26/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahavita, hono, izao fitondrana izao, tsy misy toa azy, mahatanteraka fanamby… Odian’ny sasany tsy hita, hono, izany, fa fandresen-dahatra ny asa vita. Aleo hitsara ny vahoaka ifotony: misitraka fihatsaram-piainana toy inona, ohatra? Odian’ny mpitondra sy ny mpiara-misalobon-komana tsy hita koa ve fa miara-dalana amin’izany ary manoatra lavitra noho izay kely hoe vita aza ny raharaha […]
Par Taratra sur 25/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Iray volana katroka anio ny Krismasy. Tokony efa hiditra amin’ny fitoniana amin’izay ny firenena. Tsy mila korontana ny vahoaka. Mitady fandriampahalemana sy filaminana. Misy anefa ireo andian’olona mikatsaka fikorontanana amin’izao fotoana izao. Miantso hetsi-bahoaka etsy sy eroa. Tsy ekena. Ireo karazan’olona efa mpanakorontana hatramin’izay indrindra tamin’ny andron’ny Tetezamita ihany no tazana mandrangaranga ady sy mihantsy […]
Par Taratra sur 24/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mpivavaka ny Malagasy… Tsy misy Malagasy tsy manolotra ny fiainany ho an’Andriamanitra. Saingy naha samihafa azy ankehitriny ny fahatahorana ilay Andriamanitra tokony hatahorana. Tsy vaovao aminy io mivavaka sy matahotra an’Andriamanitra io! Tsy resahina lava ny fahasamihafan’ny finoana fa manitatra lavitra ny adihevitra. Dia… fivavaky ny Malagasy mandrakariva ilay hoe: “omeo anay anio ny hanina […]
Par Taratra sur 22/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy misy tsy mitampim-bava sy vaky vava amin’ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao. Anisan’ny italanjonan’ny maro amin’izany ny tsy firaharahana izay miteny, ny fanamarinan-tena, ny tsy fiaikena ho diso, ny fitompoana teny fantatra, ny tsy fandinihan-tena… Efa samy nampiaka-peo ny amin’izany, ohatra, ny mpanao politika, ny firaisamonina sivily, ny fiangonana, ny mpampianatra mpikaroka… Inona no eo? […]
Efa raikitra izy ity…
Par Taratra sur 21/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mety sa tsy mety amin’ny Malagasy ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia ? Tsy fanontaniana tokony hipetraka izao intsony izany. Efa raikitra izy ity… Miandry amin’ny faran’ny herinandro indray izay mbola te hamaly izany. Maro ny nitsivalana, maro ny nanakiana sy naneho tsy fankasitrahana ny fandraisana ity fihaonana an-tampony ity. Angamba, raha tsy fohy ny fitadidiana, […]
Par Taratra sur 19/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitenin’ny tanora ankehitriny ny hoe : “ianao koa ohatra ny mampihomehy“. Raha ny marina, mahasosotra, na mahatezitra aza. Mba hisian’ny fitoniana izay hoe ohatra ny “mampihomehy” izay. Ambaran’ny mpandinika fa anisan’ny mahatonga ny hehy ny fakana tsy tsaroana ny toeran’ny olona mampihomehy, ka tsy hanao na tsy mahavita ny fiteniny sy ny fihetsiny ny tena, […]
Izao vao mahalala madio
Par Taratra sur 18/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Samy nahatsapa ny rehetra indrindra fa ny mponina mipetraka eto an-drenivohitra fa niova endrika ny tanàna. Tsy ilay mikorontana be ireny intsony no hitan’ny maso fa tanàna milamindamina. Mihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana, madio ny lalan-kely sy ny arabe, Voaloko ny rindrina ao anaty tonelina, mirehitra ny ankamaroan’ny jiro, voavoatra ny simba rehetra, noesorina ka nalefa […]
Misia foana ny frankofonia
Par Taratra sur 17/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahavariana tokoa isika amin’ny trangan–javatra samihafa. Samy mandroritra izay tandrify azy, samy miteny ny fahitany azy, samy milaza izay tiany ho lazaina. Asa tokoa raha izany ny fiarahamonina iainana, ankehitriny, na efa nolovaina hatramin’izay, na izany mihitsy isika Malagasy. Ho avy ity ny frankofonia, manome toromarika ny mpitondra. Niainga tamin’ilay tsy fampianarana ny mpianatra. Natao […]
Mihaingo ambony tsikoko ?
Par Taratra sur 16/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Frankofonia mahabe resaka… Tsy mba resaka tsara toy ny nandraisantsika ny « Lalaon’ny Frankofonia » anefa ny resabe mandeha manodidina ny fandraisana ity fihaonana an-tampony ity. Tena ratsy endrika sa misy manaratsy endrika ? Fanontaniana saro-balina izay, fa ny rehetra, farafaharatsiny ny mponina eto Antananarivo aloha, no afaka mitsara izany. Misy ny foto-drafitrasa maro vita na an-dalam-pamaranana. Tsy […]
Ny mahamaika tsy mahadodona
Par Taratra sur 15/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Herinandro latsaka kely eo ho eo sisa dia hanomboka ary hisokatra amin’ny fomba ofisialy ity hoe fihaonana an-tampon’ny frankofonia, atao eto amintsika. «Madagasikara ho ivon’izao tontolo izao». Izany ny teny manaitra hita amin’ireo takelaka lehibe fanaovana dokambarotra, amin’ny toerana sasany eto an-dRenivohitra. Ankoatra ireo sainam-pirenen’ireo vahiny handray anjara amin’izany, hita mihofahofa eny amin’ireo « rond point » […]
Fanjakana mitanjaka fa tsy matanjaka
Par Taratra sur 14/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Na inona tenenina, tsy takona afenina ny fahalemen’ny fitondrana: mitanjaka fa tsy matanjaka. Tsy mahavita ny asany ny fitondram-panjakana. Lasa misahana izany ho azy ny vahoaka. Eo, ohatra, ny fiarovana ny tanindrazana tsy ho lasan’ny vahiny. Ny mpitondra aza no fositra, mivaro-tanindrazana. Mbola endrik’izay fanaovan’ny vahoaka ny asa tsy vita sy tsy voafehin’ny fitondrana mitanjaka […]
Fisaraham-bahoaka amin’ny mpitondra izao…
Par Taratra sur 12/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana ihany ity fitsaram-bahoaka ity? Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Mandeha ny tombana etsy sy eroa, vinavina izay hitranga. Manana ny fijeriny ny raharaha sy ny mpitondra ny vahoaka, matoa mpitsara? Tsy mihatra araka ny tokony ho izy ny lalàna. Tsy ambany lalàna avokoa ny olom-pirenena rehetra, fa misy ny tsimatimanota na fantatry […]
Arirarira tsy ahitan-drariny ny fototry ny olana
Par Taratra sur 11/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Kolikoly avo lenta, kiantranoantrano, fisian’ny tsimatimanota, tsy fanarahan-dalàna, fanagadrana izay mihetsika, fivarotan-tanindrazana, harem-pirenena gaboraraka, tsy firaharahana ny hafa, tsy fanajana ny teny nomena… Ireo no olana fototra amin’ny fitondrana, fa tsy ny hoe ny maha voafidy azy na tsia, ny fananan’ny maro anisa, mahasolo tena ny vahoaka… Be ny raharaha maloto sy tsy mazava, vitavita […]
Fa isika nahay nifidy ?
Par Taratra sur 10/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Trump etsy, Trump eroa… Izay aloha no malaza izao. Tsy lany ny adihevitra, saingy ny mahagaga dia toa iray ihany ny fironana: malahelo fa i Trump no lany. Ny marimarina kokoa maro ireo nanantena fa i Hillary Clinton no ho filoha amerikanina vehivavy voalohany eo. Fanehoan-kevitry ny Malagasy eto Madagasikara, hita anatin’ny tambajotra “Facebook”, heno […]
« Précédent 1 … 27 28 29 30 31 … 39 Suivant »